Semalt को साथ SEO कीवर्ड अनुसंधान आयोजना
Semalt मा हाम्रा धेरै ग्राहकहरू बोन्करहरू जान्छन् जब तिनीहरूले सुन्दछन् कि कति कुञ्जी शब्दहरूले उनीहरूको वेबसाइटहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछन्। तिनीहरू तुरुन्तै सुझाव दिन्छन् कि ती चीजहरू ग्रहण गर्छन् उपयोगी कीवर्डहरू हुन्, तर हामीले तिनीहरूको रोल सुस्त गर्नुपर्नेछ किनभने किवर्डहरूले त्यस तरीकाले कार्य गर्दैनन्।
तपाइँको साइटमा अर्थ भएका कुञ्जी शब्दहरू राख्नु र प्रयोग गर्नु भनेको तपाईको दिमागमा चम्किरहेको पहिलो शब्द लिनु जस्तो सरल छैन। तपाईलाई अभ्यास, अनुसन्धान, र अनुभव चाहिन्छ चीजहरू सही तरीकाले पूरा गर्नका लागि। यो जहाँ छ Semalt भित्र आउँछ। एक कम्पनी को रूप मा तपाइँको वेबसाइट को निर्माण को लागी समर्पित, तपाइँ शाब्दिक रूप मा यसलाई राम्रो जो कोही भेट्टाउने छैन। यो सबै हाम्रो अद्भुत ग्राहकहरु को लागी धन्यवाद छ तपाईको आत्म, हाम्रो अद्भुत टीम, र व्यापार मा हाम्रो वर्षहरु को लागी।
यदि तपाईं हाम्रो वेबसाइटको माध्यमबाट जानुभएको छ भने, तपाईंसँग उपयोगी जानकारी हुनुपर्दछ हामी कसरी SERP को पहिलो पृष्ठमा तपाईंको वेबसाइट प्राप्त गर्न सक्दछौं र हामी तपाईंलाई कसरी शीर्ष स्थानमा ल्याउँछौं।
यदि तपाइँसँग छैन भने, हामी तपाइँलाई यो मनपराउने एउटा भ्रमण गर्ने सल्लाह दिन्छौं।
तपाइँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ कि कुन खोजशब्दहरू SEO अनुकूलको रूपमा योग्य छन् र जुन तपाईको कल्पनाबाट केवल अनियमित भविष्यवाणीहरू हुन्?
पहिलो बन्द, कुञ्जी शब्दहरू के हुन्?
कसले भन्छ यो पढ्ने सबैलाई थाहा छ उनीहरू के हुन्? हो, हामी सबैको एक विचार छ, र हामी जान्दछौं कि ती इन्टरनेट ट्राफिकको चुम्बक हो, तर हामीले त्यसलाई अझ राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। वर्षौं अनुसन्धान गरेर र कुञ्जीशब्दहरूको बारेमा सिकेर, Semalt आत्मविश्वासले आफैलाई कीवर्ड विशेषज्ञ कल गर्न सक्दछ। यद्यपि हामी केवल यसको बारेमा गर्व गर्दछौं किनकि हामी कुञ्जी शव्दहरू बुझ्छौं।
कुञ्जी शब्दहरू प्रासंगिकताको शब्द हुन् जसले कागजातमा शीर्षकको सार दिन्छ। तपाइँको वेबसाइटमा कुञ्जी शब्दहरूले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। तिनीहरू मार्करहरू हुन् इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू र वेब क्रलरहरू भर पर्दछ सही वेबसाइटहरू खोज्नको लागि। तिनीहरू बिना, त्यहाँ कुनै तरिका छैन तपाईंले Semalt जस्ता वेबसाइटहरू फेला पार्नुहुनेछ जब तपाईं वेबसाइट प्रबन्धन कम्पनीहरूको लागि खोजी गर्नुहुन्छ।
SEO खोजशब्दहरू कसरी अनुसन्धान गर्ने र फेला पार्ने बारेमा चरणहरू
चरण 1: व्यापार को बारे मा वर्तमान ज्ञान मा आधारित प्रासंगिक शीर्षक को एक महत्वपूर्ण सूची बनाउनुहोस्।
लिनु पर्ने पहिलो चरण भनेको विषयवस्तुहरूको विचार गर्नु हो जुन तपाई सामान्य शब्दहरूमा श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ। -10-१० शीर्षकहरू आउँदा जुन तपाईलाई आफ्नो व्यवसायको लागी महत्त्वपूर्ण लाग्छ, तपाईले त्यसपछि ती विषयहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ केही सम्भावित कुञ्जी शब्दहरू फेला पार्न।
यदि तपाईं एसईओहरू वा वेब-निर्माणले कसरी काम गर्दछन् भनेर परिचित हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई आफ्नो आलामा सम्भावित तातो शीर्षकहरूको कल्पना हुनुपर्दछ, ती विषयहरू हुनुपर्दछ जुन तपाईंले बारम्बार भेट्नुहुनेछ वा सायद तपाईंले आफ्नो प्रतियोगिताको वेबसाइटमा फेला पार्ने शीर्षकहरू। उत्तम शीर्षक/खोजशब्दहरू प्राप्त गर्न, आफ्नो दर्शकहरूको जुत्तामा आफैलाई राख्नुहोस् र आफैलाई प्रश्नहरू सोध्नुहोस् जस्तो यी प्रकारका विषयहरू हुन् जुन मेरो लक्षित दर्शकहरूले अनुसन्धान गर्नेछन्? यी प्रश्नहरूको उत्तर दिइसके पछि तपाईको विषयहरू के हुन्छ भन्ने बारे तपाईसँग स्पष्ट विचार छ।
चरण २: कुञ्जी शब्दहरूको साथ ती शीर्षकहरूमा भर्नुहोस्
के तपाइँ सम्झनुहुन्छ कि हामीले यी विषयहरूले कसरी तपाइँको कुञ्जीशब्दहरूमा मार्गदर्शन गर्दछन्? यो जहाँ तपाइँले तपाइँको कुञ्जी शव्दहरूको सूची भर्नुहुन्छ। अब जब तपाईंसँग केहि शीर्षकहरू छन् जुन तपाईं ध्यान दिन चाहनुहुन्छ; तपाईं केहि खोजशब्दहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ जुन यी शीर्षकहरूमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ। यी कुञ्जी शब्द वाक्यांशहरू तपाईंको सामग्री र वेबसाइटलाई SERPs (खोजी ईन्जिन नतिजा पृष्ठहरू) मा श्रेणीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले इन्टरनेटमा सान्दर्भिक जानकारी फेला पार्न यी मध्ये केही वा ती खोजशब्दहरूको प्रयोग गर्दछ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं मार्केटिंग अटोमेसन उपकरण मा एक वेबसाइट छ, तपाईं brainstorm मार्केट स्वचालन विषय र कुञ्जी शब्दहरु को आवश्यकता छ। ती मा समावेश हुन सक्छ:
मार्केटिंग स्वचालन उपकरणहरू के के हुन्
मार्केटि auto स्वचालन सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्ने के-के तरिकाहरू छन्?
कसरी ईमेल मार्केटिंग स्वचालन प्रयोग गर्ने
शीर्ष स्वचालन उपकरणहरू
यी केहि विषयहरू हुन् जुन तपाईका पाठकहरूले रोक्ने छन्। यो चरण महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईको कुञ्जी शब्दहरू दाहिने खुट्टामा सुरु गर्ने कुरा निश्चित गर्दछ, यद्यपि यसले तपाईलाई कुञ्जी शब्दहरू दिदैन। यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंलाई वाक्यांशहरूको राम्रो विचारहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको लक्षित दर्शकहरूले प्रयोग गर्ने जब त्यस विशेष शीर्षकसँग सम्बन्धित सामग्री खोजी गर्न जानकारी खोजी गर्दा। जब हामी चरणहरू सूचीबद्ध गर्न जारी राख्छौं, हामी यी कुञ्जीशब्दहरू र वाक्यांशहरूलाई संकुचित गर्नेछौं, ताकि तपाईंसँग धेरै फराकिलो वा अप्रसिद्ध खोजशब्दहरू छैनन्।
सामग्री रणनीति, र एसईओ कीवर्ड संगठित विधिहरू Semalt द्वारा विकसित
आज, हामी हेर्न सक्दछौं कि अधिक र अधिक खोजशब्दहरू गुगल द्वारा हरेक दिन इन्क्रिप्ट भइरहेको छ। प्रतिस्पर्धा अगाडि रहनको लागि, कुञ्जी शब्द विचारहरूको साथ आउने अर्को स्मार्ट तरीका छ, जुन तपाईंको वेबसाइटले पहिले खोजिएको कुन कुञ्जी शव्दहरूमा पत्ता लगाएर हो। सही डाटा प्राप्त गर्न, तपाईंलाई Semalt एनालिटिक्स प्याकेज वा गुगल वेब एनालिटिक्स सफ्टवेयरको मद्दत चाहिन्छ। यी स्रोतहरूले तपाईंको वेबसाइटको ट्राफिक स्रोतहरूमा ड्रिल गर्दछ, र तपाईंको साइटमा सबै ट्राफिकलाई आकर्षित गर्ने कीवर्डहरू पहिचान गर्न तपाईंको कार्बनिक खोज ट्राफिकमा क्रमबद्ध गर्नुहोस्।
यो बुद्धिमानी हो कि तपाइँ यस अभ्यासलाई बारम्बार दोहोर्याउनुहुन्छ। एक बिरूवा जस्तै, तपाइँको वेबसाइट को लागी निरन्तर ध्यान र खिल को योजना को आवश्यकता छ। तपाईंले सुकाउने र अनुत्पादक भागहरू काट्नु पर्छ र तिनीहरूलाई नयाँ नयाँ विचारहरूको साथ बदल्नुहोस्। यो गरेर, तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई दर्जा दिईएको सब भन्दा राम्रो मौका दिनुहुन्छ।
चरण:: अनुसन्धान सम्बन्धित खोज सर्तहरू।
यो भाग प्राय तपाइँको कुञ्जी खोज अनुसन्धानको बखत पप अप हुन्छ। प्राय: जसो नभए पनि तपाईसँग पहिले नै सम्बन्धित कुञ्जी शव्द एक सम्बन्धीत विचार छ तपाइँले खोजशब्द अनुसन्धानको क्रममा भेला भएका सूचनाहरूबाट सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूको।
यदि तपाईं बढि कुञ्जी शब्दहरूको बारेमा सोच्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने व्यक्तिहरूले एक विशेष शीर्षकको बारेमा खोजी गरिरहेका हुन सक्छन्, तपाईंले Google.com प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ। सम्बन्धित खोजी सर्तहरूमा एक नजर राख्नुहोस् जुन तपाईं खोज प्यानलमा कुञ्जीशब्द प्लग गर्दा देखा पर्दछ। गुगलले परिणामहरूको गुच्छा प्रर्दशन गरे पछि तपाईं गुगलको नतीजाहरूको तल स्क्रोल गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंले खोजका लागि केही सुझावहरू देख्नुहुनेछ जुन तपाईंको मूल इनपुटसँग सम्बन्धित छ। यी खोजशब्दहरू उपयोगी खोजी गर्न सक्दछ जब सम्बन्धित खोजी सर्तहरूको खोजी गर्दा।
चरण। : प्रत्येक शीर्षकमा टाउको र लामो-पुच्छर कुञ्जी शव्दहरूको मिश्रण जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाईंले यी सर्तहरूको बारेमा कहिल्यै सुन्नु भएको छैन वा बुझ्नुहुन्न भने, यहाँ एक विवरण छ। मुख्य सर्तहरू कुञ्जी शव्दहरू हुन् जुन सामान्यतया छोटो हुन्छ र कुञ्जी शब्दहरूको अधिक सामान्य फाराम। तपाईले तिनीहरूलाई मुख्यतया एउटा मात्र पाउनुहुनेछ - तीन शब्द लम्बाईमा, तपाई कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै। यद्यपि, लामो-पुच्छ खोजशब्दहरू लामो कुञ्जी वाक्यांश हुन् जुन मुख्यतया तीन शब्द वा अधिक हुन्छ।
तपाईको कुञ्जीपाटी रणनीतिमा कुञ्जीशब्दका यी फारामहरूलाई मिलाउन महत्त्वपूर्ण छ। यदि यो इन्टरनेट को लागी आउँछ, सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट सबैभन्दा विविध छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँको कुञ्जी रणनीति राम्रोसँग सन्तुलित छ कि तपाइँसँग लामो अवधिको गोल र छोटो अवधि का जीत छ।
चरण:: तपाईंको प्रतिस्पर्धीका उच्च प्रतिस्पर्धीहरूले यी कुञ्जी शब्दहरूको लागि कसरी क्रमबद्ध हुन्छ हेर्नुहोस्
यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ जानुहुन्छ र तपाइँको प्रतिस्पर्धा को वेबसाइट क्लोन गर्नुपर्छ। केवल किनकि तपाईंको प्रतिस्पर्धीले केहि गर्दैछ भन्दैमा यसको मतलब तपाईलाई चाहिन्छ वा यो तपाईका लागि राम्रो काम गर्दैन। यो सिद्धान्त कुञ्जी शब्दहरूमा पनि लागू हुन्छ। केवल कुञ्जी शब्दको सेटले मात्र बनाएकोले, तपाइँको प्रतिस्पर्धा वेबसाइट रैंकको मतलब यो होइन कि तपाइँ तपाइँलाई त्यहि गर्छ। जे होस्, तपाइँ तिनीहरूको साइटहरू मार्फत जानुपर्दछ र कुन प्रतियोगिता खोज्नुपर्दछ जुन तपाइँको प्रतिस्पर्धाको लागि क्रमबद्ध गर्न कोशिस गर्दैछ यसले तपाइँलाई क्रमबद्ध हुन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाइँको प्रतिस्पर्धी को लागी केहि खोजशब्दहरु को लागी दर्जा छ कि तपाइँको सूची मा छन्, पनि, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ एक राम्रो छनौट गर्नुभयो। जहाँसम्म, तपाईले सबै अन्य कुञ्जी शव्दहरू फ्याँक्नु बुद्धिमानी हुँदैन किनकि तपाईसँग भएको प्रतिस्पर्धाले प्रयोग गरेन। याद गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धा जित्ने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ र न कि बराबर हो।
चरण:: उपयोगी कुञ्जी शव्दहरू पत्ता लगाउनको लागि गुगल ऐडवर्ड्स किवर्ड प्लानर प्रयोग गर्नुहोस्
अब जब तपाइँले कुञ्जी शव्दहरूको सहि मिश्रण फेला पार्नुभयो, यो समय र अधिक मात्रात्मक र विश्वसनीय डेटा प्रयोग गरेर तपाईंको सूचिहरूलाई संकुचित गर्ने समय हो। Semalt यो तपाइँको लागी हुन्छ, तर तपाइँ तपाइँको निपटान मा केहि उपकरणहरु को लागी हेर्न सक्नुहुन्छ जुन काम गर्न सक्दछ। जे होस्, यहाँ केहि सिफारिसहरू छन् जुन उपकरणहरू उत्तम छन्।
गुगल ऐडवर्ड्स किवर्ड प्लानरको विशेष मिश्रण (यो गर्न तपाईले एडवर्ड्स खाता सेटअप गर्नुपर्नेछ। तर तपाईंलाई विज्ञापनहरू राख्नुपर्दैन) र गुगल ट्रेन्ड्स।
किवर्ड प्लानर, पहिले कुञ्जीशब्द उपकरणको रूपमा परिचित, तपाइँले खोज भोल्युम र ट्राफिक अनुमानको बारे जानकारी दिनुहुन्छ तपाइँले खोजिरहनु भएको कुञ्जीशब्दहरूको लागि। दुर्भाग्यवस, जब गुगलले कुञ्जीशब्द उपकरणबाट कुञ्जी योजनाकारमा परिवर्तन गर्‍यो, तिनीहरूले अधिक रोचक कार्यक्षमता हटाउनुपर्‍यो। तर तपाईले यसको लागि मेकअप गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले कुञ्जी शव्द योजनाकारबाट सिकेको जानकारीलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ र हराएको खाली ठाउँ भर्न गुगल ट्रेंड्स प्रयोग गर्नुहुन्छ।
तपाइँको सूचीमा कुनै पनि कुञ्जी शब्दलाई धेरै थोरै (वा धेरै धेरै तरिका) खोजी भोल्युम मार्क गर्नका लागि कुञ्जी योजनाकार प्रयोग गर्नुहोस्। यस असंतुलनले तपाईलाई स्वस्थ मिश्रण कायम गर्न मद्दत गर्दैन, किनकि हामीले माथि छलफल गर्यौं। तर तपाईले केहि मेटाउनु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले गल्ती गरिरहनु भएको छैन भनि निश्चित गर्न गुगल प्रवृत्तिमा तिनीहरूको प्रवृत्ति ईतिहास र अनुमानहरू बुझ्नुहुन्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि केहि कम-भोल्युम सर्तहरू सम्भावित किवर्डहरू हुन सक्छन् जुन भविष्यमा तपाईंलाई फाइदा हुनेछ।
तपाईले यस उपकरणलाई तपाईको कुञ्जी शब्दहरूको सूची कम गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल प्रवृत्तिले तपाईलाई यो निर्धारित गर्न मद्दत गर्दछ कि कुन सर्तहरू खोजी लोकप्रियतामा बढ्दैछन् र कुन मर्दै छ।